Sida loo iibsado Coinbase Stock sanadka 2022 - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida loo iibsado Coinbase Stock 2022
Isha sawirka: Unsplash.com
Dhammaantiin diyaar ma tihiin oo diyaar ma u tihiin inaad qayb ka mid ah lacagtaada gelisaan saamiyada suuqyada saamiyada? Hagaag, maqaalkani wuxuu kugu hagi doonaa sida loo iibsado saamiyada coinbase ee 2022. Hadda Coinbase waxaa si guud looga ganacsadaa sida COIN ku saabsan Nasdaq suuqa sarrifka saamiyada, qofku si fudud ayuu u iibsan karaa una iibin karaa saamiyadiisa sida badeecadaha kale ee saamiyada dadweynaha.
Saamiyada ereyada fudud waxaa loola jeedaa saamiyada shirkadaha, securities-ka lagu kala iibsado saamiyada saamiyada. Marka saamiyada shirkadu ay ku qoran yihiin sarifka saamiyada oo ay bilaabaan ganacsigooda, qiimaha saamiyadani waxa uu isbedbedalayaa marka maalgashadayaasha iyo ganacsatadu ay qiimeeyaan oo ay dib u qiimeeyaan qiimahooda dhabta ah.
Suuqyada saamiyada waa goobo dadweyne ama meel dhexe oo ay maalgashadayaasha shakhsi ahaan iyo kooxuhu isugu yimaadaan si ay u iibsadaan waxna uga iibiyaan saamiyada. Iibsashada saamiyadu waa hab dhaqaale oo macneheedu yahay in iibsadaha ama maalgeliyaha uu leeyahay lahaanshiyaha qayb ka mid ah waxa shirkad ama shirkad ay leedahay oo ay ka soo saarto faa'iido.
Waa ay dhaafeen waagii saami-qaybsiga warqad lagu caddeeyey shahaado ahaan. Haddii qof uu rabo inuu maalgashado saamiyada shirkadda, waa inuu soo booqdaa xafiiska dilaalka oo uu ku sameeyo wax kala iibsiga, ka dibna waxaa la siin doonaa shahaadada saamiga. Maanta, wax walba waxaa lagu fuliyaa si dhijitaal ah, sidaas darteed, maal-galiyuhu wuxuu u baahan yahay oo kaliya dhowr jeer oo ka mid ah kombuyuutarkiisa si uu uga iibsado saamiyada shabakadaha internetka.
Qiimaha kaydka ama saamiyada waxaa inta badan lagu go'aamiyaa baahida soo jireenka ah iyo saadka suuqa ka jira maadaama iibsadayaasha iyo iibiyayaashu ay dalbadaan. Hal shay oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah inaadan ka iibsan karin saami shirkad ay saamigeeda si gaar ah u leedahay oo ay maamusho. Shirkaddu waxay u baahan tahay inay ku dhawaaqdo hantideeda dadweyne iyada oo u sii marinaysa IPO (Bixinta dadweynaha ee bilowga ah) si ay kuwa kale awood ugu yeeshaan inay maalgashadaan saamiyadooda.
Hadda oo dhagaxa Waxay go'aansatay inay raacdo habka kale ee shirkadaha kale ee ku dhawaaqaya hantidooda hantida guud, siinaya qof walba si aan xadidnayn inuu wax u iibsado ama u iibiyo saamiyadooda saamiyada, waxaan u aragnay inay mudan tahay in la qoro wax yar si aan u caawino qof kasta oo ku riyoonaya inuu iibsado, tilmaamo ku saabsan sida loo iibsado coinbase. saamiyada waa 2022.
Waa maxay Coinbase?
Coinbase sida aad maqashay waa online crypto isweydaarsiga goob ama goob suuq ah oo wax iibsiga iyo iibinta hantida cryptocurrency sida Bitcoin, Ethereum, iyo wixii la mid ah ay ka dhacaan. Coinbase waxa ay leedahay sifooyin kala duwan oo cajiib ah kuwaas oo ka sooca qaar ka mid ah dhigiisa. Mid ka mid ah sifooyinkan ayaa ah daabacaadda joogtada ah ee macluumaadka qiimaha wakhtiga dhabta ah ee ku saabsan hantida dhijitaalka ah ee la iibinayo.
Coinbase waa mid ka mid ah isweydaarsiga crypto ugu weyn uguna wanaagsan adduunka. Waa madal fududaysay hannaankii maalgashi ee maalgashadayaasha hiigsanayay. Tani waa bixinta is-dhexgalka fudud ee iibsashada iyo iibinta hantida crypto kuwa doonaya inay maalgashadaan crypto oo aan lahayn aqoon ganacsi oo xirfad leh.
Waa maxay sababta aan u iibsado Coinbase Stock?
Maalgelinta Coinbase's COIN waxay u noqon kartaa hab fudud oo qof si aan toos ahayn uga qaybqaadan karo macaamilada crypto. Faa'iidada coinbase waxay soo saartaa kor u kaca qiimaha crypto, iyada oo la eegayo in dakhligiisu ka yimaado guddiyada iyo khidmadaha isticmaalayaasha ayaa bixiya khidmadaha macaamilka ee madal Coinbase.
Waxay ahayd Abriil 14, 2021, in Coinbase ay bilawday IPO (Bixinta Dadwaynaha Hore). Waxa uu ku furmay xad aad u culus oo ah ilaa $381 saamigiiba (marka la barbardhigo saamiyada shirkadaha kale). Coinbase waxay dalacdaa khidmadaha wax kala iibsiga ee lagu sameeyo madalkeeda sida kaydinta lacagaha iyo ganacsiga ay shirkadu lacag ku soo saarto.
Boqolkiiba ugu sarreeya dakhliga coinbase waxa la rumaysan yahay inuu ka yimi khidmadaha wax kala iibsiga ee ka ganacsiga cryptocurrencies iyo adeegyada kale sida kaydinta. Xaqiiqda ah in shirkadu aysan ku tiirsanayn hal cryptocurrency sida isha kaliya ee dakhligu waxay ka dhigaysaa xoogaa maalgashi wanaagsan si loo bixiyo tallaal.
Sida maalgashi kasta oo kale, waxaa jira arrimo la og yahay inay saameeyaan qiimaha saamiyada. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara siyaasado dowladeed, qalalaasaha dhaqaalaha adduunka, hay'adaha sharciyeynta, masiibooyinka dabiiciga ah, iyo arrimo kale oo maaliyadeed oo badan. Aaminsanaanta maalgashadayaasha ee ku saabsan mustaqbalka shirkadu waxay si toos ah u saamayn kartaa qiimaha saamigeeda. Kalsoonida ay maalgashadayaashu ku qabaan shirkadu waxa ay door weyn ka ciyaartaa kor u qaadista qiimaha saamiyadeeda, wax kasta oo taas liddi ku ah waxa ay keeni karaan natiijo liddi ku ah.
Faa'iidooyinka Coinbase ka sarreeya saamiyada kale
Ahaanshaha kaliya shirkadda crypto si ay u noqdaan kuwa ugu horreeya ee si cad ugu dhawaaqay hantidooda liiska saamiyada oo inta badan diiradda saaraya crypto, waxaa jirta suurtogalnimo sare oo ah in maalgashadayaasha kooxda iyo shakhsiyaadka leh hantida saafiga ah ay soo jiidan doonaan inay lacagtooda ku maalgeliyaan Coin Stock iyada oo ay ugu wacan tahay kala saarista la filayo. ilaalinta kuwa la tartamaya.
Iyada oo caannimada sii kordheysa iyo kororka ugu dambeeyay ee hantida crypto, dad badan ayaa diyaar u ah inay isku dayaan dhaqaalaha noocan oo kale ah laakiin isla mar ahaantaana waxay jeclaan lahaayeen inay helaan goobo la aamini karo si ay ganacsi ula sameeyaan. Liistada dadweynaha ee saamiyada Coinbase oo ay weheliso sumcadda Coinbase waxay siin doontaa maalgashadayaasha xasilloonida maskaxda si ay ugu kalsoonaadaan shirkadda.
Halkee laga iibsan karaa saamiyada Coinbase
Waxaad ka iibsan kartaa Coinbase's Coin shirkad kasta oo dilaaliinta ah oo kuu ogolaanaysa inaad ku ganacsato mid ka mid ah suuqyada caadiga ah ee Maraykanka, NASDAQ (Ururka Qaranka ee Securities Dealers Automated Quotation) gaar ahaan, kaas oo inta badan dilaaliinta ay ku shaqeeyaan. Shirkadaha dillaaliinta ah waxaa ka mid ah Sofi Invest, Robinhood, Tradestation, JP Morgan, iyo wixii la mid ah. Coinbase tan iyo markii la bilaabay waxaa lagu taxay NASDAQ waxaana loo kala iibsadaa sida kaydka calaamad ay ku qoran tahay Coinbase.
Sida loo iibsado coinbase stock
Kadib samaynta go'aanka ugu dambeeya ee ku saabsan bixinta coinbase stock tijaabo ah, waxaad markaas u baahan doontaa inaad doorato shirkadda dilaaliinta ee aad rabto inaad la shaqeyso. Ka dib markii la helo midka si fiican ula fadhiya maskaxdaada, markaa waxaad u baahan tahay inaad raacdo hababka guud ee soo socda si aad u iibsato saamiyada Coinbase;
Tallaabada ugu horreysa ee lagu iibsado saamiyada Coinbase - ama saami kasta oo ka duwan ayaa ah inaad soo qaadato dullaal. Waxa kaliya oo aad iibsan kartaa saamiyada Coinbase marka aad soo qaadato shirkad Adeeg Maaliyadeed oo shahaado u leh in ay iibiso saamiyada.
Sida qof degan Maraykanka, waxaa jira dullaal badan oo diyaar ah oo diyaar u ah inay kuu oggolaadaan inaad kaydkaga ku iibsadaan iyaga. Dhammaan inaad sameyso waa inaad sahamiso lafta saxda ah.
Waa inaad weli tixgelisaa xamuulka komishanka, noocyada xisaabaadka, ama bannaanaanshaha codsiyada kale.
Qaar ka mid ah dilaaliinta hadda si la mid ah ayaa leh ikhtiyaarka ah inay wax ka qabtaan habka cryptocurrency. Kahor intaadan maalgashan saamiyada Coinbase, tani waa waxa ugu horreeya ee aad sameyso.
Dooro inta saami ee aad rabto
Talaabada xigta ka dib marka la doorto aasaaska dullaal waa in la go'aamiyo tirada saamiyada aad rabto. Si taas loo sameeyo, eeg qiimaha ganacsi ee hadda jira, qiimaha shirkadu, oo iska ilaali caqabad kasta.
Sidoo kale, maskaxda ku hay miisaaniyad ka hor inta aan suuqa la furin.
Talo saaxiibtinimo; ha galin wax ka badan intaad khasaari karto.
Dooro Nooca Dalbashadaada
Markaad go'aansato inta saami ee aad rabto inaad iibsato, tallaabada soo socota ee sida loo iibsado stock Coinbase waa inaad doorato nooca dalbashada.
Waxaa jira afar nooc oo dalabaad ah.
Amarka Suuqa: Kani waa nooca ganacsiga ugu horrayn. Waxaad ku iibsataa ama ku iibisa saami aan la kala sooc lahayn qiimaha hadda jira.
Dalabka Xaddidan Waxaa loo yaqaan amarka la sugayo, tani waa marka aad wax ku iibsatid ama ku iibinayso qiimo go'an mustaqbalka. Mawduuc ahaan, waxay dejinaysaa ugu badnaan ama qiimaha ugu yar ee aad ku iibsanayso iibiye.
Awaamiirta joojinta socodsiinta; Qiimaha saamiyada aad iibsanayso ayaa kor u kacaya in ka badan fursad go'an heerka codsiga hadda, sidoo kale amarkan waa la fuliyay.
Dalabka Jooji: Joojinta dalabaadka waxaa la sameeyaa marka qiimaha saamiyada aad iibsanayso uu ka sarreeyo qiimaha go'an.
Marka aad kuwan dhammayso, dallaalkaaga ayaa la wareegaya oo buuxi foomamka isagoo ku hadlaya magacaaga. Tani waa sababta markaad baranayso sida loo iibsado saamiyadaada Coinbase, dooro dallaalka saxda ah.
Sida loo iibsado saamiyada Coinbase Global
Fur akoonkaaga dilaalnimada Ku buuxi codsiga faahfaahintaada.
Xaqiiji faahfaahinta lacag bixinta Maalgeli xisaabta
Baadh saamiyada. Soo hel kaydka magaca ama calaamadda calaamadda -COIN - oo baadh ka hor inta aanad go'aansan inay maalgashi fiican kuu tahay.
Iibso hadda ama ka dib. Ku iibso tirada saamiyada aad doonayso si suuq ah ama isticmaal amar xaddidan si aad u daahiso wax iibsigaaga ilaa saamiyadu ka gaadhaan qiimaha la rabo.
Hubi maalgashigaaga. Wanaaji faylalkaaga adiga oo la socda kaydkaaga.
Sida loo iibsado Coinbase Stock on Robinhood
Madaxa ilaa Roobinimada oo samee akoon ama gal
U gudub bogga tafaasiisha saamiyada halka aad ka hesho macluumaad waxtar leh sida taariikhda saamiyada iyo waxqabadka.
Xagga hoose ee bogga, ku dhufo Ganacsiga ka dibna iibso ama iibso kaliya, taas oo u muuqan doonta si caadi ah haddii aadan hadda lahayn saamiyada.
Geli qaddarka doollarka ah ee aad rabto inaad iibsato ama guji Iibso saamiyo.
Dib u eeg dalabkaaga, xaqiiji oo gudbi.
Sida loo iibsado Coinbase Stock Vanguard
Si aad u iibsato saamiyada Coinbase ee Vanguard;
Gali adiga Vanguard account
Dooro ikhtiyaarka lagu ganacsanayo ETF ama Stocks
Dooro akoon haddii aad leedahay wax ka badan hal, oo guji iibso.
Geli tirada saamiyada aad jeceshahay inaad iibsato oo dooro nooca dalbashada.
Dib u eeg soo koobida dalabka bogga Horudhac oo Gudbi Markaad ku qanacdo, dhagsii Amarka Gudbi
Kahor intaadan go'aansan inaad miisaankaaga ku tuurto saamiyada COIN, waa inaad aad u hubisaa inaad si fiican u qabatay shaqada gurigaaga waana inaad sidoo kale hubisaa inaad fahantay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato saamiyada iyo shirkada laga hadlayo.
Qof kasta oo maalgashanaya coinbase's COIN wuxuu sidoo kale u baahan yahay inuu aqoonsado aqoonta aasaasiga ah ee cryptocurrency ku xukumaya in dakhliga shirkadu ka yimaado khidmadaha lagu soo oogay lacagaha kala duwan ee macaamilada crypto ee lagu sameeyo goobta.
Waa inaad maskaxdaada ku dhejisaa in maalgashiga suuqa saamiyada ay tahay hawl khatar ah, gaar ahaan saamiyada saamiyada kuwaas oo ka soo jeeda ama ku xiran cryptos.
Qofku waxa uu lumin karaa in ka badan 60% waxa uu maalgeliyay maalmo gudahood. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo arki karaa inay tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu faa'iidada badan uguna fudud ee lagu dhisi karo qiimaha saafiga ah muddo gaaban gudaheed.
Sida Loogu Maal Gashado Nike Stock Lacag Yar | 2022 Hagaha buuxa
21 Kayd Oo Ka Yar 10 Senti Sanadkoo dhan | Sida Loo Iibsado
Sida Loo Iibsado Dogecoin Stock | Talaabada Hagaha Talaabada
Saamiyada ugu fiican ee ka hooseeya 10 doollar Si joogto ah
Sida Looga Iibsado IPO Stock Qiimihiisa Hore
Sida Loo Codsado Obamacare: Si Sahal Ah U hel Caymiska Daryeelka Caafimaadka
10 Barfuunka Ugu Qaalisan Aduunka
Waa Maxay Per Stirpes ee Dardaaranka? Siduu U Shaqeeyo
Marka ay timaado hanti ama qorshe maaliyadeed, waxaa jira go'aamo badan oo aad yeelan doonto…
Sida Loo Maalgashan Karo Mariin La'aanta 2022
In kasta oo marijuana aanay sharci ahayn gobolada qaar ee dalka Maraykanka, si tartiib tartiib ah...
Sicir -bararka maaliyadu waa aalado u adeega il -dhaqaaleedka taageeraha iyo halista…
Sida Loo Qoro Jeeg Doolar Iyo Cent
Qoritaanka jeegga uma fududa sida ay u dhawaaqdo. Waxay u baahan tahay inaad si taxaddar leh oo sax ah…
10 Siyaabood oo La Xaqiijiyay oo Wax looga Qabanayo Kharashaadka Lama Filaanka ah 2021ka
Bal qiyaas in qof ku garaacayo 'ciyaartaada Ferrari' meelna ka baxsan. Ma jeceshahay inaad u ogolaato ilmahaaga inuu ooyo...
Maxaan ugu Baahanahay Qareenka Qorshaynta Guryaha | Waxyaabaha La Raadinayo
Qareenada qorsheynta guryaha ayaa ku caawinaya inta lagu jiro nidaamka qorsheynta hantida iyo ka dib inta lagu jiro nidaamka maxkamada probate. Waxay…
Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada Qarsoodiga ah ee Victoria 2022
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Qorshayn Maaliyadeed 2022
Intee in le'eg ayaad u baahan tahay inaad hesho si aad u xarayso cashuuraha
Dib-u-eegida Amaahda Shakhsi ahaaneed ee Dawladda Dhexe ee Badda: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato